Itoobiya oo doonaysa inay kumanaan ciidankeeda ah kala baxdo Somalia haddii uu sii socdo dagaalka TPLF. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
November 5, 2020 Xuseen 1
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Dowladda dalka Itoobiya ayaa qorshaynaysa inay Kumanaan kamid ah ciidankeeda kala baxdo Soomaaliya xilli ay sii xumaanayso xaaladda dalkaasi gaar ahaan gobolka Tigreega oo dagaalo ka socdaan.
Warar hoose oo warbaahint ku heshay saraakiil Itoobiyaan ah ayaa sheegaya in ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu qorshaynayo in kumanaan katirsan ciidankiisa laga soo saaro Soomaaliya si ay ugu biiraan dagaalka ka dhanka ah jabhadda TPLF oo dagaal kula jirta ciidanka Federalka.
Ciidamada ku sugan Galgaduud, Koonfur Galbeed iyo qaybo kamid ah gobolka Gedo ayaa lafiyaa inay dib ugu laabtaan Itoobiya haddii aan maalmaha soo socda xal laga gaarin dagaalka ay dowladdu iclaamisay ee ka dhanka ah TPLF.
Gobolka Tigreega oo ay horay ugu sugnaayeen tobanaan kun oo katirsan ciidanka federalka Itoobiya ayaa waxaa hadda loo diray boqolaal kale oo qayb ka noqon doona dagaal ay sheegtay Addis Ababa in lagu soo afmeerayo kooxo ka soo horjeeda qaranimada dalka Itoobiya.
Qaramada Midoobey ayaa walaac ka muujisay xaaladda ka soo cusboonaatay dalkaasi, waxaana xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey uu sheegay in dagaalka shuruud la’aan lagu joojiyo ayna dedaal ku bixin doonaan nabadda gobolka.
Wararkii ugu dambeeyey ee aannu caawa ka helayno dagaalki ayaa sheegaya in Jabhadda Tigreegu ay xirtay hawada gobolka waxaana go’an isgaarsiinta deegaamadaasi inkastoo dowladda federalku ay guulo ka sheegatay dagaaladii ugu dambeeyey.
Saan ogahay itoobiya hubkeeda 75% waxaa gacanta ku haya tigreyda marka ma malaynayo inuu Abiy Ahmed dagaal wax kaga qaadi karo. Hadii xitaa lagu farxi lahaa inay ciidanka itoobiya somalia ka baxaan waxaa markiiba booskooda buuxin doona al shabaab oo kaashanaya maleeshiyada mooryaanta.
Saas awgeeda maahan wax la soo dhaweyn karo inay itoobiya koonfur ka baxdo. Saan u arko mareexaankay dani ugu jirin inay ciidanka itoobiya hadeer koonfur ka baxaan maxaa yeeley dhaxdoodey ka qarxaysaa. Farmajo wadnaha buu farta ku hayaa kkkkkkkkkk.